By Victoria Akpan TMLT October 20, 2021 School, Travel 0 Comments
- Ọbá akwụkwọ ndị mara mma -
Ọtụtụ ọbá akwụkwọ mara mma ma dịkwa jụụ iji nye gị ebe dị mma ma dịkwa mma. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị na -ejide n'aka na ha ga -ewepụ ume gị.
Na post a, anyị achịkọtara ndepụta ọba akwụkwọ kacha mara mma. Ọzọkwa, ọmarịcha ihe owuwu ihe owuwu a abụghị naanị ihe dị egwu, kamakwa ha na -echekwa ọtụtụ ihe odide kacha mkpa n'akụkọ ihe mere eme. Gaa n'ihu n'ịgụ ka ị chọpụta.
30 Ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa
1. Ọbá akwụkwọ nke St. Mang's Abbey (Germany)
Ọ bụ ezie na ntakịrị ihe akwụkwọ ọgụgụ izizi ka dị na St. Mang's Abbey dị na Füssen, Germany, ihe owuwu ụlọ dị mma nke ukwuu nke mere ka nleta.
Ime ụlọ oval mara mma, nke jupụtara na frescos mara mma ma na -ahụ ebe nri ndị mọnk, ka jikwa akwụkwọ.
Agbanyeghị, Abbey St. Mang bụbu ebe obibi ndị mọnk. Mana na mbido afọ 1700, mgbe ngagharị iwe mgbanwe mere ka ọtụtụ ụlọ ụka Katọlik tụgharịrị na Protestantism na Europe niile, ọ tụgharịrị bụrụ ụlọ ụka Baroque.
Mgbe ndị isi Oettingen-Wallerstein weghaara abbey ahụ ka agha Napoleon gachara, ewepụrụ mkpokọta mbụ na ọdee akwụkwọ nke akwụkwọ ahụ na mbido 1800.
(A na -edebe mpịakọta na akwụkwọ ndị ahụ na Mahadum Augsburg.)
2. Ọbá akwụkwọ Tianjin Binhai (China)
The Ọbá akwụkwọ Tianjin Binhai bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị ọhụrụ n'ụwa - ma si otú a bụrụ nke ọgbara ọhụrụ. E hiwere ya na 2017 ma dị na mpaghara Binhai nke Tianjin, China. Nke a bụ obodo ukwu dị n'akụkụ osimiri na mpụga Beijing.
A na -akpọ nnukwu ụlọ mgbakọ dị n'etiti ahụ site n'ahịrị akwụkwọ nke, na mgbakwunye na ụlọ nde 1.2, "na -arụ ọrụ dị ka ihe niile site na steepụ ruo ebe obibi," dị ka nkwupụta akụkọ 2017 sitere na ụlọ ọrụ MVRDV.
Ọzọkwa, akụkụ nke shelves na -aga n'ihu ihu ihu iko abụọ na -ejikọ ọbá akwụkwọ ahụ na ogige dị n'akụkụ nke ọzọ.
Tụkwasị na nke ahụ, dị ka nkwupụta mgbasa ozi si kwuo, a na -ezube akụkụ na akụkụ ahụ pụrụ iche nke ụlọ nzukọ ahụ iji gbaa ohere dị iche iche ohere, dị ka ịgagharị, ịgụ ihe na '' ịtụle ''.
3. Ụlọ nsọ Haeinsa (South Korea)
A kpọrọ ụlọ nsọ Haeinsa nke dị n'Ugwu Gaya na Haeinsa, South Korea aha UNESCO World Heritage Site. Nke a bụ maka ịnabata Tripitaka Koreana, nchịkọta kacha zuo oke nke ihe odide Buddha dị adị.
Akwụkwọ a, nke a pịrị na ihe karịrị nkụchi osisi 80,000 n'ime narị afọ nke iri na atọ ma were ihe karịrị nde mkpụrụedemede iri ise na abụọ na mpịakọta 13, enweghị mmejọ ọ bụla ama ama.
Ọzọkwa, e wuru ụlọ nsọ Haeinsa na narị afọ nke 15 iji gosipụta Tripitaka.
Otú ọ dị, dị ka UNESCO, ụlọ ndị ahụ na -egosi "ikike dị ịtụnanya n'ịmepụta na itinye usoro nchekwa eji arụ ọrụ iji chekwaa nkụchi ndị a."
4. Ọbá akwụkwọ Malatesta (Italy)
Ime ụlọ Ọbá akwụkwọ Malatesta nwere ọmarịcha ihe owuwu ụlọ jiometrị nke ụdị Renaissance mbụ nke Italy. Nke a dịkwa na tebụl 58 yiri pew nke ejiri nchịkọta ígwè mbụ ha wee chekwaa mkpokọta bara uru nke akwụkwọ ọgụgụ 341.
Ọzọkwa, enwere ihe dị 400,000 na mkpokọta, gụnyere 287 incunabula (akwụkwọ nta emepụtara tupu 1501). Na mbipụta narị afọ nke 3,200 na narị isii, yana ọbaakwụkwọ nke Pope Pius VII.
Tụkwasị na nke ahụ, Ọbá akwụkwọ Malatesta dị na Cesena, Italy, bidoro tupu amụọ akwụkwọ. Ọ bụ otu ọbá akwụkwọ ọha ọha kacha ochie mepere emepe, malitere na narị afọ nke 15.
5. Ọbá akwụkwọ Strahov (Czech Republic)
E wuru Ụlọ Nzukọ okpukpe n'ime ọbá akwụkwọ Prague Strahov Monastery na 1679. Ọ bụkwa ọmarịcha ihe atụ nke oke ihe ngosi Baroque.
Ọbá akwụkwọ ahụ nwere ọtụtụ ọmarịcha ihe owuwu ụlọ, dị ka eserese osisi a pịrị apị nwere ihe na -egosi edemede akwụkwọ na eserese elu ụlọ mara mma nke Siard Noseck sere na narị afọ nke 18.
6. Mafra National Palace Library (Portugal)
Ọbá akwụkwọ Rococo a dị ịtụnanya dị na Mafra National Palace nke Portugal. Nke a bụ ọkaibe Baroque wuru n'okpuru iwu Eze Joo V na narị afọ nke 18.
Ọzọkwa, ihe karịrị mpịakọta 35,000 ejiri akpụkpọ anụ mee site na narị afọ nke 14 ruo 19 ka edobere na ọmarịcha ebe a.
Tụkwasị na nke a, otu ụsụ na-ebi (n'ụzọ iwu) n'ọbá akwụkwọ maka ịchịkwa ọrịa na-ebibi ihe megide ụmụ ahụhụ na-emebi akwụkwọ. Ọ pụtakwara iche maka ọmarịcha anya ya na nnukwu akwụkwọ ya.
7. Ọbá akwụkwọ Joanina (Portugal)
Ọbá akwụkwọ Baroque Joanina dị egwu na narị afọ nke 18 na Mahadum Coimbra dị na Coimbra, Portugal, bụ ịma mma Portuguese ọzọ nke ụsụ na-eche nche.
Ọ nwere ọmarịcha arches ndị na -ekewa nnukwu ọnụ ụlọ atọ, nke ọ bụla nwere elu ụlọ na -ese ihe na igbe akwụkwọ arụpụtara site n'ọhịa osisi mara mma ma ọ bụ nke e sere ese.
Ọzọkwa, ihe dị ka akwụkwọ 250,000 dị n'ọbá akwụkwọ, ebe ọtụtụ n'ime ha na -arụ ọrụ na nkà mmụta ọgwụ, ọdịdị ala, akụkọ ihe mere eme, ọmụmụ mmadụ, sayensị, iwu obodo na nke akwụkwọ, nkà ihe ọmụma, na nkà mmụta okpukpe.
Na mgbakwunye, ụsụ ya na-eri ahụhụ so na atụmatụ nchekwa maka opekata mpe afọ 200. Ndị na -elekọta ya na -ejikwa guano na -ekpuchi arịa ụlọ kwa abalị iji mee ka ọ dị ọcha.
8. Ụlọ akwụkwọ kọleji Trinity (Ireland)
Ọbá akwụkwọ dị na kọleji Trinity dị na Dublin nwere akwa plasta dị larịị mgbe a rụchara ya na 1732. Agbanyeghị, achọrọ mgbasa ka nnukwu nchịkọta ọbá akwụkwọ ahụ mepụtara.
N'ihi ya, e buliri elu ụlọ ya na 1860 iji wee nwee ohere maka ụlọ ugbu a na-ebu nnukwu ite na igbe akwụkwọ. A na -edebe puku kwuru puku akwụkwọ na ihe ochie dị ụkọ n'oge ochie na nnukwu ọbá akwụkwọ, nke ọ bụla na -eme ka ọ pụta ìhè.
Ọzọkwa, "Akwụkwọ nke Kells" na ụbọ akwara Brian Boru, ụbọ akwara Gaelic mgbe ochie sitere na ya bụ akara mba Ireland sitere na ya.
9. Ọbá akwụkwọ Abbey nke Saint Gall (Switzerland)
Nke a Baroque rococo oriri na saịtị UNESCO World Heritage saịtị na St. Gallen, Switzerland, bụkwa ihe ịtụnanya ụlọ, a na -ewerekwa ya dị ka otu n'ime ọba akwụkwọ ndị mọnk kacha mkpa n'ụwa.
Okooko osisi, na -akpụgharị ihe na -emetụta ihe onyonyo ụlọ. Ihe owuwu ụzọ mbata osisi na -ese site na ọkwa nke abụọ nke nnukwu ụlọ nzukọ, na -enye ohere ohere ikuku oge ochie.
Alsop, ihe odide ndị malitere na narị afọ nke asatọ ka a na -ahụ n'ọbá akwụkwọ Abbey nke Saint Gall. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọ mepere ọha, ụlọ ịgụ ihe bụ naanị ebe ị nwere ike gụọ akwụkwọ 160,000 ọ bụla ebipụtara tupu 1900.
10. Ọbá akwụkwọ na All Souls College (England)
Henry VI na Archbishop nke Canterbury wuru College of All Souls of the Faithful Departed na Oxford na 1438.
Onyinye Christopher Codrington nke £ 10,000 (ihe karịrị otu nde na ego taa) iji wuo ọbá akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ahụ, yana nchịkọta nke onwe ya nke mpịakọta 12,000, abịaghị ruo 1710.
Nicholas Hawksmoor rụrụ ụlọ ọbá akwụkwọ ọhụrụ ahụ, nke emechara na 1752. Akwụkwọ ahụ nwere agba dị iche iche na-adị iche ugbu a na shelves teel uzuzu uzuzu, nke nnukwu ọmarịcha plasta nwere okpu.
Ihe dị ka akwụkwọ 185,000 ka edobere na nchịkọta ahụ, ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime ha biri tupu afọ 1800.
11. Ọbá akwụkwọ Sainte-Geneviève (France)
Ọbá akwụkwọ Sainte-Geneviève dị na Place du Panthéon na Paris. Ọ bụkwa ihe ama ama maka ihe ọhụrụ ọ na -eji okpokoro ígwè ekpughere ekpughere (usoro ọha nke mbụ mere ya).
Okpokoro ahụ na -emepụta exoskeleton ferrous lacy nke na -akọwa ụlọ pụrụ iche. Ọzọkwa, tỌbá akwụkwọ ahụ ketara mkpokọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde abụọ site na Abbey nke Sainte-Geneviève mbụ nke Henri Labrouste chepụtara na 1843.
Agbanyeghị, maka ụmụ akwụkwọ nọ na Mahadum Paris, ọ na -eje ozi dị ka isi nyocha na akwụkwọ ntụaka.
12. George Peabody Ọbá akwụkwọ (Maryland)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Ọbá akwụkwọ George Peabody bụ ihe ama ama maka ọkwa ihu ya ise nke ihe ịchọ mma nke na-ebili dị egwu dị ka achicha agbamakwụkwọ ruo elu elu dị mita 61 n'ịdị elu.
Ọzọkwa, ọbá akwụkwọ ahụ malitere n'oge e hiwere Peabody Institute, nke onye enyemaka George Peabody guzobere iji sọpụrụ "obiọma na ile ọbịa" Baltimore.
Ọzọkwa, Edmund G. Lind mepụtara ya na mmekorita ya na Dr. Nathaniel H. Morison, onye mbido izizi, wee mepee na 1878.
Ihe karịrị aha 300,000 ka edobere n'ọbá akwụkwọ ahụ, nke ka ọtụtụ n'ime ha sitere na narị afọ nke 18 ruo mmalite narị afọ nke 20.
13. Ọbá akwụkwọ mahadum Leipzig (Germany)
Ọbá akwụkwọ mahadum dị na Leipzig, Germany, kwagara ebe ọ nọ ugbu a na 1891, n'ime ọmarịcha ụlọ Neo-Renaissance nwere ọmarịcha atrium ọcha, ogidi toro ogologo, steepụ gbawara agbawa, na oriọna ụwa.
Ọzọkwa, ihe owuwu ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbibi n'oge Agha IIwa nke Abụọ, mana ka afọ asatọ gbasaa na nrụzigharị, ọ maliteghachiri n'afọ 2002 n'ebube mbụ ya.
Agbanyeghị, ọ malitere Ọbá akwụkwọ Mahadum na 1542 site n'aka Rector Caspar Borner, onye malitere nchịkọta puku ihe.
Na mgbakwunye, na njigide nke mkpokọta pụrụ iche, nchịkọta ugbu a nwere ihe dị ka nde nde ise, nde mgbasa ozi nde 5.2, yana akwụkwọ akụkọ 7,200 ugbu a.
14. Ọbá akwụkwọ steeti New South Wales (Australia)
Mitchell Wing, nke nwere ọmarịcha ụzọ mbata, nnukwu ihu igwe, yana mpụta mkpụrụ osisi marble nke Tasman Map mere eme na ala ya, nwere ike bụrụ akụkụ ama ama nke Ọbá akwụkwọ Ọchịchị New South Wales (NSW) na Sydney.
Emechara ihe owuwu a na 1910 ma akpọrọ ya aha David Scott Mitchell, onye nyere mpịakọta ya n'ọbá akwụkwọ.
N'ime nde ihe nde ise dị na nchịkọta ahụ bụ akwụkwọ akụkọ mbụ James Cook (akwụkwọ nde abụọ na ihe karịrị otu nde foto). Ọzọkwa, Ọbá akwụkwọ steeti New South Wales bụ ọbá akwụkwọ kacha ochie na Australia.
Agbanyeghị, gọọmentị zụtara Ọbá akwụkwọ ndebanye aha Australia nke 1926 na 1869 ka ọ bụrụ Ọbá Akwụkwọ Ọha na Sydney n'efu, ọbá akwụkwọ izizi mbụ nke mpaghara n'ezie; o mechara bụrụ Ọbá Akwụkwọ Ọchịchị.
15. Ọbá akwụkwọ ọha nke New York (New York)
Ọbá akwụkwọ alaka ụlọ ọrụ nka nke 1911 dị na Fifth Avenue na New York City nwere ike ịbụ otu n'ime ụlọ mara mma nke obodo.
Ụlọ ọgụgụ isi nke Rose na -apụta n'etiti ọtụtụ oghere dị ịtụnanya maka mkpokọta nkeonwe yana obere ọba akwụkwọ n'ime oke dị ebube.
Ọzọkwa, nnukwu oghere ahụ nwere oghere obodo abụọ ma chandeliers na oriọna ndị na -achọ tebụl osisi oak ogologo mma.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-eji ákwà ngebichi na-enwu gbaa kpuchie elu ụlọ ya dị mita 52; ọ bụ ebe kacha mma ị ga -efu n'igwe ojii.
Ọzọkwa, New York Public Library nwere nchịkọta ihe dị nde 15, nke gụnyere ihe odide ochie, akwụkwọ mpịakọta ndị Japan oge ochie, na mbipụta ọgbara ọhụrụ.
16. Ọbá akwụkwọ ọha nke Stockholm (Sweden)
Onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ Gunnar Asplund bụ onye Sweden haziri Ọbá Akwụkwọ Ọha nke Stockholm na 1922. Emechara ya ka afọ isii gachara.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ama ama n'obodo, nke juputara na nnukwu rotunda na nnukwu ụlọ nzukọ cylindrical.
Agbanyeghị, ihe karịrị nde nde abụọ e biri ebi na nde 2.4 kaseti, CD, na akwụkwọ ọdịyo ka edobere na ihe ncheta arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ a.
17. Akwụkwọ Beinecke Rare & Ọbá akwụkwọ Ọkachamara (Connecticut)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Mahadum Yale University Beinecke Rare Book & Manuscript Library dị na New Haven, Connecticut, bụ otu n'ime ọba akwụkwọ kacha ibu n'ụwa ewepụtara naanị maka akwụkwọ na ihe odide na -adịghị ahụkebe.
Ọzọkwa, Gordon Bunshaft na ụlọ ọrụ ama ama ọgbara ọhụrụ Skidmore, Owings & Merrill rụrụ ya ma rụchaa ya na 1963, Vermont marble, granite, bronze, na iko.
Agbanyeghị, Gutenberg Bible na “Nnụnụ America,” nke a na-egosipụta na-adịgide adịgide, so n'ime ọtụtụ akụ echekwara na nnukwu ụlọ elu akwụkwọ ya nwere enyo gbara agba.
18. Ọbá akwụkwọ Liyuan (China)
Ọbá akwụkwọ a pere mpe dị n'ime obere obodo Huairou, China. Ọ dịkwa awa abụọ n'ebe ugwu nke Beijing.
Ọzọkwa, ọ na-adọrọ mmasị ọbụlagodi na enweghị mgbịrịgba na mgbịrịgba, mgbanwe site na nnukwu ụlọ, nke a na-elekarị anya dị ka ọmarịcha.
N'ime, ikpe, steepụ, na ikpo okwu na -egosi akwụkwọ ma mepụta ebe maka ntụgharị uche udo, nke Li Xiaodong haziri.
Tụkwasị na nke ahụ, a na -eji iko osisi toro n'ime kechie iko dị na mpụga ka ọ ga -agwakọta nke ọma na odida obodo gbara ya gburugburu.
19. Ọbá akwụkwọ osikapa Sir Duncan (Scotland)
Agbanyeghị na Mahadum Aberdeen hiwere na 1495, ọbaakwụkwọ ya gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na narị afọ nke iri abụọ na otu.
Ọbá akwụkwọ Sir Duncan Rice, nke a na -akpọbu New Library nke Mahadum Aberdeen, nwere ihu dị mfe nke na -apụta iji kpughee atrium na -agbagharị, vortex dị ike nke na -ejikọ ọkwa asatọ nke ihe owuwu ahụ.
Schmidt Hammer Lassen Architects mepụtara ọmarịcha ọgbara ọhụrụ, nke enyere na 1965 iji dochie ọba akwụkwọ gara aga.
Ọzọkwa, o nwere mpaghara ọgụgụ 1,200, ebe ndebe akwụkwọ, nchịkọta akụkọ ihe mere eme. Ọzọkwa, ọ nwere ụlọ akwụkwọ na -adịghị ahụkebe. Ụlọ ọrụ Space Age nwere ike ịnabata ụmụ akwụkwọ 14,000.
Agbanyeghị, etinyere ihe owuwu ahụ iji mezuo ụkpụrụ gburugburu ebe obibi siri ike, na -enweta ya BREEAM kacha mma.
20. Ọbá akwụkwọ mahadum Tama Art (Japan)
Ọbá akwụkwọ Hachioji nke Mahadum Tama Art dị na Hachioji, Japan, bụ onye nrụpụta ihe nrite nke Japan Toyo Ito rụrụ ya wee bụrụ ọmarịcha ụlọ.
E wuru ya na 2007 ya na arches na iko siri ike, na -enye ohere ka mpịgharị n'èzí na -agwakọta ya na oghere mara mma n'ime.
Agbanyeghị, ala nke abụọ nke ọbá akwụkwọ ahụ nwere nchịkọta oghere nwere akwụkwọ karịrị 100,000.
Ọzọkwa, ọbá akwụkwọ ahụ nwere ihe dị ka akwụkwọ Japanese 77,000, akwụkwọ mba ụwa 47,000, na akwụkwọ akụkọ 1,500, na itinye uche na nka, imewe, na ihe owuwu ụlọ (na -atụghị anya).
21. Ọbá akwụkwọ mba Klementinum (Czech Republic)
Dị ka akụkụ nke mahadum Jesuit, ndị Ọbá akwụkwọ mba Klementinum meghere na Prague na 1722. Agbanyeghị, ugbu a, ọ nwere ọbá akwụkwọ mba Czech Republic, nke nwere ihe karịrị puku akwụkwọ ọgụgụ okpukpe mba ụwa 20,000.
Ogidi amba bara ụba na ọla edo gbara gburugburu, Jan Hiebl nwere ọmarịcha ụlọ, yana eserese nke Eze Ukwu Joseph nke Abụọ na ngwụcha ụlọ nzukọ ahụ na -egosipụta ime ime ọbá akwụkwọ ahụ.
Ihe onyonyo a na -anọchite anya ọrụ na -aga ịchekwa akwụkwọ n'ụlọ ọba akwụkwọ ndị mọnk.
22. Ọbá akwụkwọ obodo Stuttgart (Germany)
Nke pere mpe Ọbá akwụkwọ obodo Stuttgart bụ otu ọbá akwụkwọ mara mma n'ụwa, nwere akụkọ itoolu nke akwụkwọ.
Ọzọkwa, o nwere ebe a na-agụ ọtụtụ ala mepere emepe dị ka pyramid isi-ala nke egosipụtara na usoro imewe nke Yi Architects.
Ọzọkwa, nchikota ahịrị dị ọcha na elu ọcha na -enye ohere ka ọtụtụ puku akwụkwọ na -eku ume ndụ na agba n'ime ụlọ.
23. Ọbá akwụkwọ ebe obibi ndị mọnk Wiblingen (Germany)
Site na ntuzi aka nke Christian Wiedemann, emechara ọba akwụkwọ ebe obibi ndị mọnk Wiblingen. Otú ọ dị, e hiwere ebe obibi ndị mọnk ahụ na 1093, ma ọ bụ ruo n'afọ 1744 ka a rụchara ọbá akwụkwọ ahụ.
Ọzọkwa, ọbaakwụkwọ a nwere akwụkwọ puku iri na ise, nke ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha nwere onyonyo ọgọ mmụọ na nke Ndị Kraịst.
24. Akwụkwọ Nsọ Alexandria (Ijipt)
Ejiri Bibliotheca Alexandrina wuo mpụta mpụga na akụkọ ihe mere eme n'ime. Ma a raara ya nye na 2002 nye ọbá akwụkwọ kacha ibu n'ụwa.
Ọbá akwụkwọ mbụ nke Aleksandria, nke gbara ọkụ afọ 2,000 gara aga, nwere nchịkọta akwụkwọ kacha ukwuu n'ụwa n'oge ahụ.
Agbanyeghị, Snhetta, ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịrụ ụlọ na Norway degharịrị ọbá akwụkwọ ọhụrụ ahụ. E nwekwara mpịakọta nde asatọ na ogige ahụ, yana ebe ngosi nka anọ, ebe ngosi ihe mgbe ochie anọ, ụlọ nyocha mweghachi ihe odide, na planetarium.
Ọzọkwa, ihe ngebichi dị n'ihu ihu ụlọ ahụ na -egosi mmalite nke asụsụ mmadụ, na -eme ka ọ bụrụ ọbá akwụkwọ mara mma n'ụwa.
25. Ọbá akwụkwọ Admont Abbey (Austria)
Ọbá akwụkwọ Admont Abbey dị n'ụdị Baroque. Ọbá akwụkwọ a, nke nwere mpịakọta 70,000, so na otu n'ime ebe obibi ndị mọnk kacha ochie na nnukwu.
Na 1776, Joseph Huebner wuru ọmarịcha ọbá akwụkwọ. Ihe osise dị mgbagwoju anya nke Bartolomeo Alromonte na -egosi ọtụtụ ọkwa nke ihe ọmụma mmadụ.
26. Ụlọ Ọgụgụ Royal Portuguese (Brazil)
Ndị mbata na ọpụpụ Portuguese atọ sitere na Royal Portuguese Cabinet of Reading na 1822. Ọbá akwụkwọ a mara mma nwere ihe karịrị narị puku anọ, ihe akaebe na-adịghị ahụkebe na ọrụ pụrụ iche.
Ọbá akwụkwọ ahụ mepere ọha ụzọ ya na 1887. Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na ndị Portuguese webatara ọdịnala na akwụkwọ ọgụgụ na Brazil ọhụrụ nwere onwe ya.
27. Biblioteca Joanina (Portugal)
Biblioteca Joanina bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa, ọ dịkwa na Mahadum Coimbra na Central Portugal.
Ọbá akwụkwọ a, nke bụ ihe ncheta mba, ka e wuru na narị afọ nke 18 n'oge ọchịchị Portuguese John John V.
Ọzọkwa, Biblioteca Joanina bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ abụọ n'ụwa ebe ụsụ na -echebe akwụkwọ site na ụmụ ahụhụ. Ụsụ na -apụta n'abalị, a na -asachakwa ụlọ ahụ n'ụtụtụ iji mee ka ọ maa mma.
28. Ọbá akwụkwọ El Escorial (Spain)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Ihe karịrị akwụkwọ 40,000 ka edobere n'ọbá akwụkwọ mara mma nke ebe obibi ndị mọnk El Escorial. Eze Philip nke Abụọ nke Spain nyere iwu ka a rụọ ya na 1563.
Enwere ike ịhụ frescoes asaa n'ọbá akwụkwọ. Arithmetic, astronomy, geometry, egwu, ikwu okwu, mgbagha, na ụtọ asụsụ so na nka na -emesapụ aka nke e sere na foto.
29. Ọbá akwụkwọ Bodleian (Oxford, Uk)
Ọbá akwụkwọ Bodleian bụ otu n'ime ihe mara mma n'ụwa, na -egosipụta Magna Carta na Shakespeare First Folio n'etiti akwụkwọ nde iri na atọ ya. Agbanyeghị, ihe atụ mbụ nke atụmatụ ọba akwụkwọ okirikiri nwere ike ịchọta n'ọbá akwụkwọ a.
30. Ọbá akwụkwọ Morgan & ebe ngosi nka (NY, USA)
Ọbá akwụkwọ Morgan & ebe ngosi nka, nke dị na etiti New York City, bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ mara mma n'ụwa.
Akwụkwọ ndọtị ọla kọpa nwere ihe odide izizi nke Sir Walter Scott na de Balzac, ma nọrọ n'ụlọ nchịkọta nzuzo nke fancier JP Morgan.
Ụlọ akwụkwọ mahadum kacha dị egwu n'ụwa
1. Ọbá akwụkwọ Campus nke Mahadum Central University nke UNAM (Mexico City, Mexico)
Ọbá akwụkwọ Campus UNAM Central University dị na Mexico City bụ otu n'ime ọtụtụ ihe owuwu ụlọ pụrụ iche nke nwetara ọnọdụ UNAM UNESCO World Heritage.
Ọbá akwụkwọ a, n'adịghị ka nnukwu ụlọ ndị ọzọ dị na kampos, bụ nnukwu ọmarịcha ihe nwere akụkụ anọ juputara na eserese nke onye ama ama ama ama Juan O'Gorman.
Ịdị elu ụlọ, ụdị ya, na ihe ịchọ mma na -enyere ya aka ịpụ iche na igwe mmadụ.
Na 1956, ebugharị ọbá akwụkwọ ahụ site na ebe mbụ ya na Mexico City Center, ebe ọ nọrọla ọkara narị afọ. O nwere ihe dị ka akwụkwọ 400,000 na nchịkọta ya.
2. Thomas Fisher Rare Library Library na Mahadum Toronto (Toronto, Canada)
The Ọbá akwụkwọ nke Thomas Fisher Rare nke Mahadum Toronto nwere nchịkọta kacha ukwuu na Canada nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme na nke ọha na -enweta.
Ihe odide okpukpe, ihe ndekọ sayensị na-agbagha agbagha, akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na etchings nke narị afọ nke 17 so na nnukwu ọbá akwụkwọ ahụ.
Original Shakespeare folios, akwụkwọ nnwale nke Darwin's Origin of Species, Newton's Principia Mathematica, na mbipụta 1493 nke Nuremberg Chronicle so na isi ihe nke Thomas Fisher Rare Book Library.
Nchịkọta Robert S. Kenny gụnyekwara iberibe akwụkwọ papaịrọs Ijipt, akwụkwọ Hebraica na Judaica dị ụkọ, yana akwụkwọ akụkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịrị 25,000.
3. Ọbá akwụkwọ Philological nke Mahadum efu (Berlin, Germany)
Ọbá akwụkwọ Philological nke Mahadum efu nke Berlin enwetala ọnọdụ n'etiti ọba akwụkwọ na -adọrọ mmasị ma na -arụsi ọrụ ike nke Germany n'ihi ọmarịcha ọmarịcha ya na ọmarịcha ihe owuwu ya.
Ejiri ọmarịcha onye nhazi ụlọ Norman Foster kee ọbá akwụkwọ ahụ n'ụdị ụbụrụ mmadụ. E nyere Berlin Brain n'ọbá akwụkwọ ahụ mgbe e wuru ya na 2005.
Ọ nwere akụkọ anọ n'ime ihe mkpuchi dị ka afụ nke nwere ikuku na-acha uhie uhie, nke nwere enyo translucent dị n'ime nke na-enyocha anyanwụ iji mepụta gburugburu na-eme enyi.
A na -enye ntakịrị oge nke ìhè ehihie site na oghere oghere na -agbasa ebe niile. Ọbá akwụkwọ Philological bụ ihe nchekwa ụlọ Berlin nke na -echekwa mpịakọta 700,000.
4. Ụlọ akwụkwọ ochie nke Magdalen College na Mahadum Oxford (Oxford, UK)
A maara Mahadum Oxford nke ọma maka mmemme agụmakwụkwọ ya, mana a makwaara ya nke ọma maka ọbá akwụkwọ ọpụrụiche ya, nke ekwenyere na ọ nwere ihe karịrị nde akwụkwọ 11.
The Old Library na Magdalen College bụ mahadum n'ọbá akwụkwọ usoro okpueze mkpuru. Ihe karịrị 20,000 akwụkwọ na ihe odide na -adịghị ahụkebe dị na Magdalen's Old Library.
E bipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ndị a tupu afọ 1800. N'inwe ihe omumu ya na ihe ngosi Gothic Revival dị egwu, a na -ekwenye na ọbá akwụkwọ Old Magdalen College bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ mara mma n'ụwa.
Agbanyeghị, ndị chọrọ ịhụ mpaghara stori ahụ n'onwe ya ga -emerịrị oge nyocha ihe nchịkọta pụrụ iche nke ọbaakwụkwọ ahụ.
5. Ọbá akwụkwọ Balme na Mahadum Ghana (Ghana, West Africa)
Ọbá akwụkwọ Balme na Mahadum Ghana bụ otu n'ime ọba akwụkwọ nyocha nke Africa, na -ejere ụmụ akwụkwọ, ndị nyocha, agụmakwụkwọ na ndị ọrụ ozi.
Ọbá akwụkwọ ahụ, nke e hiwere na 1940, ugbu a nwere ihe karịrị 100,000 akwụkwọ, microfilms 500, ọtụtụ ihe odide na -adịghị ahụkebe, yana ọnụ ọgụgụ elektrọnikụ buru ibu.
Ọzọkwa, ọbá akwụkwọ Balme dị na Ghana nwere ngalaba isii, nchịkọta pụrụ iche, na mpaghara ịgụ akwụkwọ awa 24.
A na -anọchite anya Depository Regional United Nations na mkpokọta Bank World na nnukwu ọba akwụkwọ, nke nwere ọtụtụ isiokwu na mpịakọta ọkachamara.
6. Mahadum Salamanca Library (Salamanca, Spain)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Ndị Mahadum Salamanca Library bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ mara mma nke Spain, nke dị n'etiti etiti akụkọ mahadum.
Eserese ụlọ ụlọ ama ama “EL Cielo de Salamanca” kwụbara na ọba akwụkwọ ochie, nke e wuru na narị afọ nke 15.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe eserese mebiri n'oge nrụzigharị ọbá akwụkwọ ahụ na narị afọ nke 18, e zobere akụkụ n'okpuru okpuru ụlọ ọhụrụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200.
Eweghachila foto a ma tinye ya ugbu a na ebe ngosi nka mahadum. Ihe karịrị mpịakọta 160,000 ka edobere n'ọbá akwụkwọ mahadum a mere ihe akụkọ, ọtụtụ n'ime ha malitere na narị afọ nke 11.
7. Mahadum Coimbra General Library (Coimbra, Portugal)
Ọbá akwụkwọ izugbe nke Mahadum Coimbra bụ ọbá akwụkwọ nke abụọ kachasị na Portugal. Ọbá akwụkwọ a, nke hiwere na 1537, kewara n'ime ụlọ abụọ dị iche iche.
Edificio Novo, nke e wuru na 1962, bụ ihe owuwu ọhụrụ. N'akụkọ anọ, ọ na -echekwa ihe karịrị otu nde akwụkwọ. Biblioteca Joanina, nke akpọrọ aha Eze Joo V, tọrọ ntọala na mbido narị afọ nke iri na asatọ.
Ọzọkwa, e nwere ihe karịrị akwụkwọ 200,000 e bipụtara tupu afọ 1800 n'ime ụlọ Baroque a.
Biblioteca Joanina nwere nnukwu ọnụ ụlọ atọ, arches mara mma, osisi bara ụba, na ọmarịcha ụda olu. N'elu ọnụ ụzọ, a na -etinye uwe agha nke King Joo V.
8. Mahadum Misr maka Sayensị na Nkà na ụzụ (6th nke October City, Egypt)
Mahadum Misr nke Egypt maka Sayensị na Nkà na ụzụ nwere ọpụrụiche na ọgbara ọhụrụ nwere teknụzụ dị oke ọnụ.
Ọzọkwa, ihu igwe ndị yiri pyramid na ihe owuwu ahụ jikọtara ntakịrị mmetụ nke oge ochie Egypt na teknụzụ na sayensị ọgbara ọhụrụ.
Ìhè sitere n'okike na -asọba n'ime ọbá akwụkwọ ahụ site na ọkụ ọkụ ndị a na -akpali mmasị. A tụgharịrị ụlọ ebe a na -edebe ọba akwụkwọ ka ọ bụrụ ebe ngosi nka nke na -egosipụta ụdị ihe owuwu na akụkọ kacha ewu ewu na Egypt.
Ọzọkwa, Studentsmụ akwụkwọ mahadum abụghị naanị ndị nwere ike iji ọbaakwụkwọ. Ọrụ ọbá akwụkwọ ahụ ghe oghe maka ndị otu obodo na ndị nyocha si n'akụkụ ụwa niile.
9. Old Library na St. John's College of Cambridge University (Cambridge, UK)
The Old Library na Mahadum Cambridge St. John's College bụ otu n'ime ọba akwụkwọ kacha ochie na UK mara mma. Ihe owuwu ụdị nke Jacobean Gothic, nke e wuru na 1624, dị mita 110 n'ogologo na mita 30 n'obosara.
Ọ bụ ezie na n'ihu ụlọ ahụ mara mma yiri ka ọ sitere n'ike mmụọ nsọ n'oge Renaissance, nnukwu windo ọbá akwụkwọ ahụ na -echetara ụlọ ọrụ Gothic Revival.
Ọzọkwa, ọbá akwụkwọ ahụ nwere igbe akwụkwọ 42 na harpsichord nwere akwụkwọ ntuziaka abụọ sitere na Mahadum Cambridge.
Old Library na -emeghe ndị otu mahadum na ndị ọbịa n'ime izu ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụghịzị ọbaakwụkwọ na -arụ ọrụ.
10. Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum na Mahadum Humboldt (Berlin, Germany)
N'etiti Berlin, nnukwu ihe ịtụnanya Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum na-agbada mita 20,000 nke ala. N'okpuru otu ụlọ, ọbá akwụkwọ ahụ nwere ngalaba 12 dị iche iche.
Ọzọkwa, Ihe karịrị ebe ọrụ 1,250 na igwe nyocha 500 dị. Enwere njikọ ikuku n'ime ụlọ ahụ niile, mpịakọta ya niile ghekwara ọha.
Ọzọkwa, ihe karịrị nde akwụkwọ 2.5 na mbipụta sitere na akwụkwọ akụkọ 2,400 dị na Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum.
Ọbá akwụkwọ a dị ịtụnanya na ebe ọmụmụ ihe bụ nke kacha ibu na ịnweta na Germany. Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ a nwere ihe niile gbasara akụnụba, sayensị mmekọrịta, ọdịbendị, na ọba akwụkwọ ụmụ mmadụ.
11. József Attila Ọmụmụ na Ozi Ozi na Mahadum Szeged (Szeged, Hungary)
The Ebe mmụta na ozi ozi József Attila na Mahadum Szeged dị na Hungary, nke mepere na 2004, na -adọta ndị ọbịa 5,000 dị ịtụnanya kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, ihe ịga nke ọma nke etiti ahụ enyela ya ohere ịgbanwe site na itinye ego na-abụghị uru gaa na mmasị na-erite uru. Ịdị obosara ụlọ ahụ, ịdị ọcha ya doro anya, na ọmarịcha ihe owuwu ya enyela aka na ọganiihu ya.
Ọrụ ụmụ akwụkwọ, ụlọ nzukọ, ọnụ ụlọ nkuzi, na ọba akwụkwọ mahadum, nke nwere ihe karịrị nde abụọ, dị na ogige agụmakwụkwọ.
Ọzọkwa, etiti ahụ, nke dị na obodo nke atọ kachasị na Hungary, aghọọla ebe a na-elekwasị anya na ọrụ ọdịbendị na sayensị maka mahadum yana obodo Szeged niile.
12. Ọbá akwụkwọ Paul Barret Jr. na kọleji Rhodes (Memphis, TN)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Ọbá akwụkwọ Paul Barret Jr. na kọleji Rhodes dị na Memphis, Tennessee, dị na azụ ụlọ akwụkwọ ahụ wee na -arụ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ nke abụọ na kọleji ahụ.
Ọbá akwụkwọ a, nke mepere na 2005, ka e wuru iji kwado ụdị ihe owuwu ụlọ Gothic nke kọleji. Ihe owuwu a, nke a na -eji mkpọmkpọ ebe na okwute nzu mee, nwere ụlọ elu abụọ, klọọkụ na apse.
Ọzọkwa, nrapara nke kọleji na ọdịnala pụtara ìhè na elu ọla kọpa na slate, akara a pịrị apị, na nhazi Gothic.
Ọbá akwụkwọ ahụ nwere ihe karịrị akwụkwọ 500,000, yana ụlọ nyocha kọmpụta, mpaghara teknụzụ maka ịnụrụ ihe na ndị nwere nkwarụ, yana ebe ihe nkiri nwere oche ruo mmadụ 32.
13. Ọbá akwụkwọ Geisel na Mahadum California, San Diego (San Diego, CA)
Ala asatọ nke Ọbá akwụkwọ Geisel na Mahadum California, San Diego, bilie ruo ihe dị ka mita 110 n'ikuku na -enweghị atụ, na -akpụpụta ọdịdị cylindrical na ntọala ọdụ ụgbọ mmiri.
Ebe sara mbara nke ọbá akwụkwọ ahụ dị na ala bụ 248 ụkwụ, ebe kachasị obosara n'elu ala dị mita 210 na akụkọ nke isii.
Ọkwa abụọ dị ala na-akwado nnukwu ụlọ elu ahụ dị okpukpu isii. Mgbatị ọ bụla ga -abịa n'ihu n'ọbá akwụkwọ ahụ ga -ewu ọkwa gburugburu ntọala ụlọ elu wee daba na ndagwurugwu, dị ka onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ William Pereira, onye wuru ụlọ a dị ịtụnanya.
14. Ọbá akwụkwọ Brotherton na Mahadum Leeds (Leeds, UK)
The Ọbá akwụkwọ Nwanna na Mahadum Leeds tọrọ ntọala na 1936, a na -akpọkwa ya aha Lord Brotherton, onye nyere aka n'ịmepụta na ịkwadebe ọbá akwụkwọ ahụ.
Ọzọkwa, Lanchester, Lucas & Lodge chepụtara atumatu ekwesịrị ịbanye na nhazi Parkinson.
Mpụta ya bụ blọk nkịtị, ebe ọ bụ na ọ chọghị ka a hụ ya. Agbanyeghị, n'ihi na ụlọ Parkinson na -egbu oge, ekpughere facade na -enweghị mma nke ọbá akwụkwọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri na ise.
Ọzọkwa, ime ụlọ ahụ, nke nwere ogidi sara mbara, ogidi ndị a na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Swedish, mgbachi ígwè dị mgbagwoju anya, na ihe ịchọ mma ndị ọzọ, dị nnọọ iche na ihu ahụ.
15. Ọbá akwụkwọ Iwu Meskill na Mahadum Connecticut (Hartford, CT)
Ọbá akwụkwọ Iwu Meskill dị na Mahadum Connecticut bụ otu n'ime ihe zuru oke yana otu ọbá akwụkwọ iwu mara mma na mba ahụ.
Ọbá akwụkwọ ahụ, dịka mahadum steeti, na -enye ọha mmadụ ọtụtụ ọrụ. Nchịkọta ya malitere na 1908 wee tinye akwụkwọ 500,000 na puku kwuru puku akwụkwọ iwu.
Ọzọkwa, Edebere iwu ahụ n'akụkụ ọ bụla nke katalọgụ ọbá akwụkwọ ahụ. Agbanyeghị, enwere ọbá akwụkwọ buru ibu nke akwụkwọ iwu mkpuchi.
Ọzọkwa, A na -akpọ Ọbá akwụkwọ Iwu Meskill dị na UConn aha Thomas J. Meskill, onye gụsịrị akwụkwọ na UConn nke rụrụ ọrụ dị ka gọvanọ Connecticut wee rụọ ọrụ na ngalaba gọọmentị atọ niile.
16. Ọbá akwụkwọ na Institute of Medicine, Science and Technology (Kedah, Malaysia)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Nnukwu ọbá akwụkwọ nke Asia Institute of Medicine, Science, na Teknụzụ dị na Kedah, Malaysia, nwere otu akwụkwọ mkpokọta na-eto ngwa ngwa n'ụwa.
Ọzọkwa, iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi ya, skyscraper a nwere teknụzụ dị elu na-eji ọkụ sitere n'okike na akụrụngwa na-arụ ọrụ ike.
Ụlọ ahụ dị ịtụnanya semicircular nwere ọkwa anọ na nnukwu nchịkọta akwụkwọ gbasara ahụike, injinịa, azụmahịa, na isiokwu gbasara ego.
Nnukwu ọbá akwụkwọ ahụ nwere ebe nkuzi dị elu, ụlọ ọrụ nyocha, na mpaghara ụmụ akwụkwọ. N'ọtụtụ ụzọ, ụlọ akwụkwọ ogige 230-acre nke ụlọ akwụkwọ ahụ na-agagharị n'ọbá akwụkwọ ahụ.
17. Ọbá akwụkwọ Butler na Mahadum Columbia (New York, NY)
Ọbá akwụkwọ Butler, nke a na -akpọbu South Hall, guzobere na 1934 na Mahadum Columbia na New York City. Emechara gbanwee aha ahụ ka ọ bụrụ Ọbá akwụkwọ Butler iji sọpụrụ Nicholas Murray Butler, onye isi oche Mahadum Columbia site na 1902 ruo 1945.
Ọzọkwa, ọbá akwụkwọ Butler nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde abụọ na ọtụtụ isiokwu metụtara ụmụ mmadụ, ebe ọ bụ naanị otu ọbá akwụkwọ 20 nke Mahadum Columbia.
Agbanyeghị, ọbá akwụkwọ ahụ, nke George Ainsworth chepụtara n'ụdị Renaissance nke Italiantali, nwere akụkọ iri na abụọ nke mpịakọta ma na -eji ọkụ ebumpụta ụwa n'ụzọ ọhụrụ.
18. Chancellor Green Library na Mahadum Princeton (Princeton, NJ)
Ọbá akwụkwọ Green Chancellor na Mahadum Princeton bụ ihe atụ mara mma nke ụkpụrụ ụlọ Neo-Gothic.
Ọmarịcha ihe owuwu ahụ, nke e wuru na 1872, na-eji oghere, arches, buttresses, na windo iko nwere ụdị diamond chọọ ya mma.
Ọ bụ ihe owuwu mbụ na kampos na -emepe emepe ka a ga -arụ maka iji rụọ ọbaakwụkwọ, etinyere ya dịka rotunda octagonal.
A na -ahụkwa ya maka atụmatụ ya na usoro ya na -eme ugboro ugboro n'ụdị geometric dị iche iche, dị ka kpakpando, diamond, okirikiri, na octagons.
19. Ọbá akwụkwọ ncheta Sterling na Mahadum Yale (New Haven, CT)
Ọbá akwụkwọ ncheta Sterling bụ ngalaba kacha ukwuu na sistemụ ọbá akwụkwọ mahadum Yale, yana nchịkọta nke nde 4. Ọdịdị ahụ dị oke egwu na-egosipụta ụlọ elu nwere akwụkwọ akụkọ 15 nwere ala nke na-anọchite anya isiokwu dị iche.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na Yale John William Sterling na James Gamble Rogers kwadoro ma hazie ọbá akwụkwọ ahụ n'otu n'otu.
Ọzọkwa, nnukwu ọbá akwụkwọ ya etinyebere aka na mmekọrịta mmadụ na sayensị.
Ọzọkwa, ọmụmụ ọdịbendị sitere n'akụkụ ụwa niile, nchịkọta maapụ akụkọ ihe mere eme, ọtụtụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma, otu mpịakọta Babilọn, akwụkwọ Benjamin Franklin, na ọtụtụ ihe odide na -adịghị ahụkebe ka edochiri anya n'ọbá akwụkwọ.
20. Ọbá akwụkwọ etiti na Mahadum Nkà na ụzụ (Delft, Netherlands)
The Ọbá akwụkwọ etiti na Mahadum Nkà na ụzụ na Delft, Netherlands, nwetara ihe nrite Dutch National Steel na 1998. Ọ bụ ọmarịcha ihe owuwu ọgbara ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ ihe owuwu ụlọ nke Mecanoo rụrụ ọbá akwụkwọ a, nke e wuru na 1997. Ewubere ihe owuwu pụrụ iche nke dị n'azụ ụlọ ihe nkiri ahụ ma nwee mgbidi na elu ụlọ kpuchiri ekpuchi nke na-eje ozi dị ka mpaghara ntụrụndụ ụmụ akwụkwọ.
E ji enyo rụọ mgbidi ya kpọmkwem n'ihu ụlọ ihe nkiri ahụ, a na -ejikwa cone ígwè chọọ elu ụlọ akwụkwọ ahụ mma. Ọzọkwa, cone nke ọbá akwụkwọ ahụ nwere ọkwa anọ n'ọba akwụkwọ ise.
21. Ụlọ Ọgụgụ Harper na Mahadum Chicago (Chicago, IL)
Ọbá akwụkwọ ncheta William Rainey Harper mbụ, nke e wuru na 1910 nke akpọrọ aha ya maka onye isi oche mbụ nke Mahadum Chicago, nwere ime ụlọ ịgụ akwụkwọ Harper.
Ewubere ụlọ ahụ n'ụdị Gothic Bekee, ụlọ ebe a na-agụ akwụkwọ nwere elu ụlọ 39 na-adọrọ adọrọ.
Emechiri ọba akwụkwọ ncheta William Rainey Harper na June 2009, ma ebugara nnakọta ndị ahụ na ọba akwụkwọ Regenstein.
Ọzọkwa, na June 2012, a kpọlitere ụlọ ọrụ ahụ wee nyegharịa ya Arley D. Cathey Learning Center iji kwanyere nnukwu onye enyemaka ego ugwu.
22. Andrew Dickson White Library na Mahadum Cornell (Ithaca, NY)
Mahadum Cornell Andrew Dickson White Library na Ithaca, New York, bụ ọbá akwụkwọ dị n'ime ọbá akwụkwọ. Ọzọkwa, Uris Library dịkwa n'ime ụlọ ahụ.
Ọzọkwa, ụlọ ahụ bụ ọbá akwụkwọ kacha ochie na kampos, ọ nweburu ihu igwe na oghere mepere emepe na -eduga na ime ụlọ Dean dị nso.
Akpa ngwongwo ígwè mbụ ahụ ka dị n'ime ụlọ ahụ, n'agbanyeghị ọkụ furu efu na ụzọ ụgbọ elu n'oge mmezi. Atụrụ, arịa ụlọ, na ihe osise sitere na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ White ka nwere ike ịhụ n'ọbá akwụkwọ.
23. Ọbá akwụkwọ ncheta Frederick Ferris Thompson na Vassar College (Poughkeepsie, NY)
Frederick Ferris Thompson, onye na-elekọta Vassar, wuru obere mgbasawanye na 1892 iji debe ọbá akwụkwọ kọleji 3,000. Nwunye Thompson raara nye di ya ọba akwụkwọ ọhụrụ na 1905.
Ọzọkwa, nchịkọta akwụkwọ na ihe odide nke kọleji na -eto eto emeela ka ọ dị mkpa ịgbasawanye usoro a.
Ụlọ katidral dị ịtụnanya nwere nnukwu nchịkọta akwụkwọ ochie a. Window mara mma dị ebube na nnukwu ụlọ ọba akwụkwọ na -egosi nwanyị mbụ nwetara Ph.D.
24. Ọbá akwụkwọ Harold B. Lee na Mahadum Brigham Young (Provo, UT)
Ọbá akwụkwọ Harold B. Lee na Mahadum Brigham Young nwere ụkpụrụ nke na -ekwu, "Ịmụ ihe site n'ịmụ ihe nakwa site n'okwukwe."
Ọzọkwa, a kwanyere Harold B. Lee, onye bụbu onye isi oche nke Ụka nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ Ụbọchị-Ikpeazụ a, n'aha ọbaakwụkwọ.
N'April 2011, otu cappella akpọrọ Vocal Point wepụtara vidiyo egwu n'ọbaakwụkwọ, ebe na Julaị 2010, e sere parody nke azụmahịa Old Spice ebe ahụ.
25. Ọbá akwụkwọ Riggs na Mahadum Georgetown (Washington, DC)
Ọ bụ naanị ọba akwụkwọ ole na ole na-adị ndụ taa, gụnyere Riggs Library na Mahadum Georgetown. Site na 1891 ruo 1970, ọ rụrụ ọrụ dị ka nnukwu ọbá akwụkwọ obodo.
Ọbá akwụkwọ Riggs dị na ụlọ elu ochie Healy Hall nke dị na ndịda. Ọdịdị ahụ, nke e wuru n'etiti 1877 na 1879, nwere ụdị ụkpụrụ ụlọ Flemish Romanesque nwere akara Baroque.
26. Ọbá akwụkwọ Duke Humfrey dị n'ọbá akwụkwọ Bodleian na Mahadum Oxford (Oxford, UK)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa.
Otú ọ dị, Ọbá akwụkwọ Duke Humfrey, ụlọ ọgụgụ kacha ochie na Ọbá akwụkwọ Bodleian dị na Oxford, nwere egwu, maapụ, ihe odide Western, Archives University, Conservative Party Archives, na mpịakọta ndị a na -adịghị ahụkebe ewepụtara tupu 1641.
27. Ụlọ ịgụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ Suzzallo na Mahadum Washington (Seattle, WA)
Ọbá akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ Suzallo, nke nọ n'elu Red Square na Mahadum Washington, bụ ọrụ nka.
Ọzọkwa, elu ụlọ elu Ọgụgụ na -enye ya ọmarịcha mmetụta, a na -ejikwa osisi siri ike chọọ ụlọ ahụ mma. Globes ejiri aka sere site n'uko ụlọ na nsọtụ ọ bụla nke ụlọ ahụ, na-enyere ụmụ akwụkwọ aka inyocha ihe ọmụma ụwa.
28. Ọbá akwụkwọ Fleet na Rhode Island School of Design (Providence, RI)
Rhode Island School of Design nwere ọbá akwụkwọ nka nnwere onwe kacha ochie na ama ama na United States.
Nchịkọta ọbá akwụkwọ ahụ aghọọla ihe na -egosi uto nka, ihe owuwu ụlọ, foto na imewe n'ihi mkpa akụkọ ihe mere eme ya.
Ọzọkwa, textiles, ọla, seramiiki, na ubi ndị ọzọ dị iche iche na -anọchite anya ya na nchịkọta.
29. Mahadum Katọlik nke Leuven Library (Flanders, Belgium)
Na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri na itoolu, e guzobere Mahadum Katọlik nke Leuven Library na Flanders, Belgium. Ndị agha German zuru ohi ma bibie ọbá akwụkwọ ahụ n'oge Agha Ụwa Mbụ na 1914.
N'agbata afọ 1921 na 1928, e wuru ọbaakwụkwọ ọhụrụ. Whitney Warren, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ America, wuru ụkpụrụ ahụ, n'ụdị ụkpụrụ ụlọ neo-Flemish-Renaissance.
30. Ọbá akwụkwọ ncheta Doe na Mahadum California-Berkeley (Berkeley, CA)
Nke a bụ otu n'ime ọbá akwụkwọ kachasị mma n'ụwa. Ndị Ọbá akwụkwọ ncheta Doe bụ ọbá akwụkwọ izizi na kampos nke Mahadum California, Berkley.
Emebere ọbaakwụkwọ ahụ ka ọ bụrụ ndị ọbịa nke ụlọ ọrụ mbụ ga -ahụ mgbe ha banyere n'ime ogige mahadum. Ọzọkwa, imirikiti ndị mmadụ n'oge a, n'aka nke ọzọ, na -abanye n'ogige ụlọ akwụkwọ site n'akụkụ ọzọ.
Ọ bụ ụbọchị ihu ọma gị iji nweta ozi dị n'elu gbasara ọba akwụkwọ kacha mara mma n'ụwa. Na -akpali mmasị? Ee! Agbanyeghị, mee nke ọma ịga leta nke ọ bụla n'ime ha.
Ọzọkwa, isiokwu a nyere aka. Biko mee nke ọma ịkekọrịta ya na ndị enyi gị na ndị ị hụrụ n'anya.
Tags:ọbá akwụkwọ mara mma n'ụwa, ọbaakwụkwọ mara mma uk, onyonyo nke ọba akwụkwọ kacha mara mma n'ụwa, ọbá akwụkwọ nke ụwa, ọbá akwụkwọ kachasị mma na US, ọbá akwụkwọ kachasị mma na akwụkwọ ụwa, foto ọbá akwụkwọ a ma ama n'ụwa
Etu ị ga -esi tufuo mmemme ngụsị akwụkwọ na mmefu ego 2021
Ụgbọ elu dị ọnụ ala iji efe efe: nhọrọ iri kacha mma ịtụle maka nkasi obi